Mkpakọrịta - WRSP
E guzobere Center for Studies on New Religions (CESNUR) na 1988 na Torino, Italy. CESNUR bụ netwọk ụwa nke ndị ọkà mmụta nke na-akwalite nchọpụta nke ndị ọkà mmụta na ngalaba nke okpukpe ọhụrụ na-ekesa ozi ndị dabeere na nchọpụta ahụ. Ndị CESNUR na-akwado nzukọ a na-enwe kwa afọ gburugburu ụwa nke ndị ọkà mmụta na-ewetara akwụkwọ banyere ọmụmụ banyere okpukpe ọhụrụ. A na-echekwa ọtụtụ n'ime akwụkwọ ndị a na weebụsaịtị CESNUR. CESNUR nwekwara ụlọ akwụkwọ buru ibu na ihe ndị ọzọ gbasara òtù okpukpe ọhụrụ na esotericism.
Ndị CESNUR na WRSP na mmeghari okpukpe na nke ime mmụọ na ọrụ ọdịdị visual. Ihe oru ngo ahu bu ihe di mkpa nke ndi otu okpukpe di iche iche nwere n'ile anya. Ụlọ ọrụ a na-enye profaịlụ ọhụụ abụọ nke okpukpe ọhụrụ nke nwere mmetụta dị ukwuu n'iche ihu igwe na nke ndị ọhụụ ọ bụla nke ndị ha na otu NRM ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ nwee ọhụụ ime mmụọ ọhụrụ, n'ozuzu ya, arụ ọrụ dị mkpa.
Massimo Introvigne (Centre maka Studies na New Religion)
Nova Religio na-akọwa nkọwa gbasara akwụkwọ na nyocha nke mmegharị okpukpe na ndị ọzọ. Nchọpụta mbụ, echiche maka ọmụmụ banyere okpukpe ọhụrụ, nyocha akwụkwọ, na nkwurịta okwu ogbako na-eme ka ndị ọkà mmụta mara nke ọma n'ọtụtụ isiokwu gụnyere: okpukpe ọhụrụ; mmeghari ohuru n'ime omenala okpukpe; ndị neo-indigenous, neo-polytheistic na revival mmegharị; amamihe oge ochie na ọgbọ dị iche iche; mmechi okpukpe; ma mee ka okpukpere chi mebie ma na-eme ka a maa jijiji.
Nova Religio na WRSP eguzobewo mmekorita iji kwadoo mbipụta nke Nkọkọ ihe ubi na imelite akwukwọ edemede na nkọwa nkọwa nke mmegharị okpukpe nke na-aga n'ihu ọrụ dị iche iche nke akwụkwọ akụkọ ahụ na WRSP. E nwere ike ịdepụta ihe ndị metụtara emegharị okpukpe na akwụkwọ akụkọ na / ma ọ bụ na weebụsaịtị na ụzọ abụọ ndị a:
Ndị na-ede akwụkwọ nwere ike ide akwụkwọ na mpaghara okpukpe ọhụrụ Nova Religio maka mbipụta a ga - edere dị ka Akwụkwọ edemede Ederede ma ọ bụ edemede edemede (3,000 na 5,000 okwu gụnyere endnotes). Iso ụzọ na ndị editọ n'ozuzu ha na-edekọ akwụkwọ iji nweta ntụziaka maka edemede Akwụkwọ Ozi ma ọ bụ edemede edemede na Nova Religio akwadoro. Ihe odide nke Ebe Ntuzi kwesiri ịdabere na nyocha nke mbu nke gunyere omumu na nyocha. Imelite akwukwo kwesiri ịdabere na nyocha mbu nke nwere ike, ma o bughi, gunyere oru ubi. Ọ bụ ezie na mkpumkpu karịa oge Nova Religio ederede, edemede edemede na ihe mmelite na-emelite ekwesịrị ịkọwa edemede na inye amaokwu na Chicago akwụkwọ ntuziaka nke Style format. Ihe kachasị mmasị na magazin ahụ bụ na ìgwè dị iche iche na omenala na nke mba nke a na-enwechaghị ihe ọmụma banyere ndị ọkà mmụta. Ndị na-ede Akwụkwọ nke Akwụkwọ ha na-edekọ edemede na Mmelite edemede Nova Religio nwere ike ịkpọ gị òkù ka ị dee profaịlụ nke òtù okpukpe ọhụrụ ahụ maka mbipụta ya na weebụsaịtị World Religions and Spirituality.
Ndị na-ede akwụkwọ nwere ike ịtinye na profaịlụ nchịkọta akụkọ nke ebe nrụọrụ weebụ maka mbipụta na weebụsaịtị World Religions and Spirituality website. Ihe kachasị mmasị na weebụsaịtị bụ ịgbasa ma gbasaa njikọta nke òtù okpukpe, na-elekwasị anya na North America. Ndị na-ede akwụkwọ na nnabata ha na-anabata maka akwụkwọ na ibe weebụ nwere ike iji profaịlụ profaịlụ dịka atụmatụ Nova Religio's ndị editọ edegbe n'ozuzu iji chọpụta mmasi na ederede Nkọwapụta Echiche ma ọ bụ edemede edemede nke kwadebere dịka ihe a chọrọ.
Mgbe ọ bụla a nabatara akwukwọ / Nwelite edemede na profaịlụ maka akwụkwọ na weebụsaịtị, usoro ha na ọdịnaya ha ga-adị iche ma gosipụta mkpa nke mbipụta abụọ ahụ.
NDỊ EZIOKWU EZIOKWU: Ụmụaka NA
Ebumnuche nke oru ime mmụọ nke umuaka bu ihe ndi oru nta akuko banyere banyere umuaka n'okpukpe ndi pere mpe na ihe omumu nke ihe omumu sayensi. Ndi oru ngo a na achikota data, n’iji usoro tozuru etozu na onu ogugu (oru ubi, ihe ndi nlebara anya, ajuju ajuju ajuju) Otu nyocha ahụ na-anwa ịlaghachi azụ, iji nweta echiche sara mbara banyere ihe ndị mere n'oge na-adịbeghị anya, mmepe iwu, na "okpukpe dị ndụ" kwa ụbọchị, nke gụnyere obodo ndị a.
Susan Palmer (Mahadum McGill)
The Project Pluralism guzobere na 1991 site Prọfesọ Diana Eck na Mahadum Harvard. Project Pluralism na-akọwa onwe ya dị ka "atụmatụ nyocha nke iri afọ abụọ nke na-eme ka ụmụ akwụkwọ na-amụ ihe dịgasị iche iche okpukpe dị na United States." oru ngo gụnyere: (1) Iji dee ihe ndị na-agbanwe agbanwe nke ngosi ochichi nke ndị America, (2) Iji nyochaa okpukpe okpukpe onwe ha ... netwọk ha na ụlọ ọrụ ndị ha na-emepụta, ụzọ ha si eme mgbanwe na mmụta okpukpe na American, (3) Iji chọpụta ihe dị iche iche nke obodo America na obodo, na (4) Iji chọpụta, na ọrụ ọrụ a, ihe ndị pụtara na okpukpe "pluralism," ma maka okpukpe na ụlọ ọrụ ọha na eze ...
WRSP bụ otu "Mgbakwunye" na Pluralism Project site na Special Project, Okpukpe ụwa dị na Richmond (WRR). WRR dabeere na ọrụ Pluralism Project maka ide akwụkwọ okpukpe na nke ime mmụọ na obodo ndị America. WRR na-akọwa ọrụ ya dịka "na-eme ka ụdị okpukpe dị iche iche dị iche iche dị na Richmond (Virginia). Na mgbakwunye na profaịlụ dị iche iche nke òtù okpukpe na nke ime mmụọ na Richmond, WRR na-akọ ọkwa dịgasị iche iche nke obodo (ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ, ememe, ụlọ ọrụ ahụ ike, ụlọ ọrụ ihe ngosi, mgbasa ozi, wdg) jikọtara na omenala okpukpe na nke ime mmụọ.
AKWỤKWỌ NDỊ EDUCI YOGA
Dabere na Ụlọ Akwụkwọ nke Oriental na African Studies na London, nke Nnyocha nke Yoga bụ ụlọ maka ndị ọkà mmụta, ụmụ akwụkwọ na ndị niile nwere mmasị na yoga. Ọ na-akwado usoro ọmụmụ, nzukọ ọmụmụ ihe na nzụkọ ihe dị iche iche yana ịkọkọta ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ gbasara ọmụmụ banyere yoga. N'ịbụ onyeisi nke Jim Mallinson, Ụlọ Ọrụ ahụ toro na Ọrụ Haṭha Yoga (2015-2020) na MA nke edoziworo na Yoga na Meditation program (enyere na SOAS ebe 2012).
Suzanne Newcombe (Mahadum Open na OZI [dabeere na King's College London])
Karen O'Brien-Kop Ngalaba Okpukpe na Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ na Center maka Yoga Studies, SOAS, University of London)
Ụlọ ọrụ Aleksanteri, nke e guzobere na 1996 na Mahadum nke Helsinki, bụ ebe etiti mba, nyocha na nkà gbasara Russia na Eastern Europe, karịsịa na nkà mmụta sayensị na ụmụ mmadụ. Ụlọ akwụkwọ ahụ na-eduzi ma na-edozi nchọpụta a ma ama n'ụwa niile. Ngalaba nke nkà mmụta okpukpe bụ obodo mmụta ụwa dum, nke enweghị okpukpe ma ọ bụ nkwenkwe ọ bụla, na-amụ banyere onye ọ bụla, omenala na mmekọrịta nke okpukpe site n'oge gara aga ruo ugbu a.
Kaarina Aitamurto (Ụlọ ọrụ Aleksanteri, Mahadum nke Helsinki)
Maija Penttilä (Ngalaba nke nkà mmụta okpukpe, University of Helsinki)